Time and condition of avoiding sex and why? – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဖိုမကိစ်စ ရှောငျရှားသငျ့တဲ့ အခွအေနနှေငျ့ အခြိနျအခါမြား
“အခွအေနေ” “အခြိနျအခါ “.. လူပွောမြားတဲ့ စကားလုံးတှရေယျပါ… သို့သျော အခွအေနနေဲ့ မကိုကျညီပဲ (သို့) အခြိနျအခါ ကို မတှကျဆပဲ ပွုလုပျလိုကျတဲ့ အရာတဈခုရဲ့နောကျမှာ အကြိုးဆကျတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ… ဆိုတော့ … သဘာဝ တရားကွီးကွောငျ့ လူသားတှေ သံဝါသ မှု ပွုကွပမေယျ့.. တခါတရံမှာ ရှောငျသငျ့တဲ့အခွအေနနေဲ့ အခြိနျ ဆိုတာ ရှိပါတယျ…
အမြိုးသမီးတဈယောကျ မီးဖှားပွီးနောကျပိုငျး လေးပတျကနေ ခွောကျပတျထိ ယောကျြားနဲ့ အတူမနသေငျ့သေးပါ…မှေးဖှားပွီးခြိနျမှာ သငျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကိုအားပွနျပွညျ့ဖို့. အနာခြုပျရိုး ပွနျကောငျးဖို့ရာ အခြိနျတဈခု လိုအပျပါတယျ.. ဒါပွငျ အရညျဆငျးနခွေငျး… ခြုပျရိုးမှ အနညျးငယျ နာနခွေငျး၊ မိနျးမကိုယျ ခွောကျသှခွေ့ငျးတှနေဲ့ လိငျမှုကိစ်စပျေါစိတျဝငျစားမှု လြော့နတေဲ့ အခြိနျတှေ ကွုံရနိုငျပါတယျ… ဒီလိုခြိနျမြိုးမှာ sex ကိစ်စကို ရှောငျသငျ့ပါတယျ..
သငျဟာ ခှဲစိတျမှု ပွုလုပျထားသူ ဖွဈပါက…
ခှဲစိတျမှုဟာ အသေးစားခှဲစိတျမှုလား ၊ ဒါ့ပွငျ ခှဲစိတျမှု ပွုလုပျထားတဲ့နရောဟာ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ မညျသညျ့အစိတျအပိုငျးလဲ.. ဒါတှေ ပျေါမူတညျပါတယျ…
ဥပမာ သငျဟာ အသေးစား ခှဲစိတျမှု လုပျထားတယျဆိုပါက…အနာကကျြဖို့ အနညျးငယျမွနျနိုငျပါတယျ သို့သျော အနာကကျြဖို့ စောငျ့နခြေိနျတှငျးမှာ ရှောငျသငျ့ပါတယျ
သငျဟာ ကိုယျဝနျပကျြကပြွီး သားအိမျခွဈထားရသူ ဖွဈပါက အနညျးဆုံး နှဈပတျ သုံးပတျ ရှောငျ့သငျ့ပါတယျ
သငျဟာ အူကခြွငျးကို ခှဲစိတျထားသူ၊ ဆီးကြိတျခှဲစိတျထားသူ၊ သားအိမျကြှံကခြွငျးကို ခှဲစိတျထားသူ ဖွဈပါက ပွနျလညျကောငျးမှနျဖို့ စောငျ့သငျ့ပါတယျ.. ဒီခြိနျမြိုးမှာ ရှောငျသငျ့ပါတယျ…
သငျ့ဆီမှာ လိငျမှ တဆငျ့ ကူးဆကျတတျသော ရောဂါ ရှိနပေါက…
HIV ၊ HPV၊ အသညျးရောငျ အသားဝါ ဘီ၊ လိငျအင်ျဂါကွှကျနို့ အပွငျ တခြို့ ရောဂါမြားဟာ လိငျဆကျဆံခွငျးမှ တဆငျ့ ကူးစကျနိုငျကွပါတယျ… မိမိမှာ ဒီလို လိငျမှ တဆငျ့ ကူးစကျနိုငျတဲ့ ရောဂါ ရှိနခေဲ့ပါက (သို့) ရှိနကွေောငျး သံသယ ရှိပါက ဆေးစဈမှု ပွုလုပျပါ.. ကုသမှု ခံယူပါ.. ဒီလို ကူးစကျရောဂါ ခံစားနရေပါက မိမိဆကျဆံဖျောကို ဖှငျ့ပွောခွငျး မပွောခွငျးဟာ မိမိအပျေါမှာ မူတညျပါတယျ.. သို့သျော ဆကျဆံခြိနျတှငျ အကာအကှယျ သုံးသငျ့ပါတယျ
သငျ့ဆီမှာ ကူးစကျရောဂါ ရှိနသေျောလညျး သငျသာ သာမနျလူတဈယောကျကဲ့သို့ relationship တဈခု တညျဆောကျနိုငျပါတယျ… လုံခွုံစိတျခရြတဲ့ လိငျဆကျဆံမှုကို သခြော လလေ့ာပွီး တခွားသူကို မကူးစကျအောငျ ကာကှယျနိုငျပါတယျ…ဆရာဝနျနှငျ့သခြောပွသပွီး ရောဂါလက်ခဏာမြား နညျးပါးအောငျ ကုသနိုငျပါတယျ… ဒါကွောငျ့ သငျ (သို့) သငျ့ဆကျဆံဖျောမှာ ကူးစကျရောဂါ ရှိနပေါက မညျသို့သောရောဂါ ဖွဈပါသလဲ ၊ သခြောအောငျ ဆေးစဈခွငျး၊ ကုသခွငျးတှေ ပွုလုပျရပါမယျ
ဒီလို အခြိနျမြိုးမှာ သငျဟာ sex ကိစ်စကို မရှောငျနိုငျပါက အကာအကှယျကို မှနျကနျစှာ အသုံးပွုတတျဖို့ လိုအပျပါတယျ…မိမိရဲ့ ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျမှသာ အခွားသောအရာတှကေို မှနျကနျစှာနှငျ့ အောငျမွငျအောငျ ပွုလုပျနိုငျမှာမို့… စိတျဆန်ဒတဈခုကွောငျ့ အမှားတဈခု မပွုမိဖို့ရာ သတိခကျြသငျ့ကွောငျ့ တိုကျတှနျးရငျး…..
လူသားတိုငျး ပြျောရှငျ လှပတဲ့ အနာဂတျကို ပိုငျဆိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးမတ်ေတာပွုလကျြ
ဖိုမကိစ္စ ​ရှောင်​ရှားသင့်​တဲ့ အ​ခြေအ​​နေနှင့်​ အချိ်​န်​အခါများ
“အ​ခြေအ​နေ” “အချိန်​အခါ “.. လူ​ပြောများတဲ့ စကားလုံး​တွေရယ်​ပါ… သို့​သော်​ အ​ခြေအ​နေနဲ့ မကိုက်​ညီပဲ (သို့) အချိန်​အခါ ကို မတွက်​ဆပဲ ပြုလုပ်​လိုက်​တဲ့ အရာတစ်​ခုရဲ့​နောက်​မှာ အကျိုးဆက်​​တွေ ဖြစ်​လာတတ်​ပါတယ်​… ဆို​တော့ … သဘာဝ တရားကြီး​ကြောင့်​ လူသား​တွေ သံဝါသ မှု ပြုကြ​ပေမယ့်​.. တခါတရံမှာ ​ရှောင်​သင့်​တဲ့အ​ခြေအ​​နေနဲ့ အချိန်​ ဆိုတာ ရှိပါတယ်​…
အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​ မီးဖွားပြီး​နောက်​ပိုင်း ​လေးပတ်​က​နေ ​ခြောက်​ပတ်​ထိ ​ယောက်ျားနဲ့ အတူမ​နေသင့်​​သေးပါ…​မွေးဖွားပြီးချိန်​မှာ သင့်​ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်​ကိုအားပြန်​ပြည့်​ဖို့. အနာချုပ်​ရိုး ပြန်​​ကောင်းဖို့ရာ အချိန်​တစ်​ခု လိုအပ်​ပါတယ်​.. ဒါပြင်​ ​ အရည်​ဆင်း​နေ​ခြင်း… ချုပ်​ရိုးမှ အနည်းငယ်​ နာ​နေ​ခြင်း၊ မိန်းမကိုယ်​ ​ခြောက်​​သွေ့ခြင်း​တွေနဲ့ လိင်​မှုကိစ္စ​ပေါ်စိတ်​ဝင်​စားမှု ​လျော့​နေတဲ့ အချိန်​​တွေ ကြုံရနိုင်​ပါတယ်​… ဒီလိုချိန်​မျိုးမှာ sex ကိစ္စကို ​ရှောင်​သင့်​ပါတယ်​..
သင်​ဟာ ခွဲစိတ်​မှု ပြုလုပ်​ထားသူ ဖြစ်​ပါက…
ခွဲစိတ်​မှုဟာ အ​သေးစားခွဲစိတ်​မှုလား ၊ ဒါ့ပြင်​ ခွဲစိတ်​မှု ပြုလုပ်​ထားတဲ့​နေရာဟာ ခန္ဓာကိုယ်​ရဲ့ မည်သည့်​အစိတ်​အပိုင်းလဲ.. ဒါ​တွေ ​ပေါ်မူတည်​ပါတယ်​…
ဥပမာ သင်​ဟာ အ​သေးစား ခွဲစိတ်​မှု လုပ်​ထားတယ်​ဆိုပါက…အနာကျက်​ဖို့ အနည်းငယ်​မြန်​နိုင်​ပါတယ်​ သို့​သော်​ အနာကျက်​ဖို့ ​စောင့်​​နေချိန်​တွင်းမှာ ​ရှောင်​သင့်​ပါတယ်​
သင်ဟာ ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ကျပြီး သားအိမ်​ခြစ်​ထားရသူ ဖြစ်​ပါက အနည်းဆုံး နှစ်​ပတ်​ သုံးပတ်​ ​ရှောင့်​သင့်​ပါတယ်​
သင်​ဟာ အူကျခြင်းကို ခွဲစိတ်​ထားသူ၊ ဆီးကျိတ်​ခွဲစိတ်​ထားသူ၊ သားအိမ်​ကျွံကျခြင်းကို ခွဲစိတ်​ထားသူ ဖြစ်​ပါက ပြန်​လည်​​ကောင်းမွန်​ဖို့ ​စောင့်​သင့်​ပါတယ်​.. ဒီချိန်​မျိုးမှာ ​ရှောင်​သင့်​ပါတယ်​…
သင့်​ဆီမှာ လိင်​မှ တဆင့်​ ကူးဆက်​တတ်​​သော ​ရောဂါ ရှိ​နေပါက…
HIV ၊ HPV၊ အသည်း​ရောင်​ အသားဝါ ဘီ၊ လိင်​အင်္ဂါကြွက်​နို့ အပြင်​ တချို့ ​ရောဂါများဟာ လိင်​ဆက်​ဆံခြင်းမှ တဆင့်​ ကူးစက်​နိုင်​ကြပါတယ်​… မိမိမှာ ဒီလို လိင်​မှ တဆင့်​ ကူးစက်​နိုင်​တဲ့ ​ရောဂါ ရှိ​နေခဲ့ပါက (သို့) ရှိ​နေ​ကြောင်း သံသယ ရှိပါက ​ဆေးစစ်​မှု ပြုလုပ်​ပါ.. ကုသမှု ခံယူပါ.. ဒီလို ကူးစက်​​ရောဂါ ခံစား​နေရပါက မိမိဆက်​ဆံ​ဖော်​ကို ဖွင့်​​ပြောခြင်း မ​ပြောခြင်းဟာ မိမိအ​ပေါ်မှာ မူတည်​ပါတယ်​.. သို့​သော်​ ဆက်​ဆံချိန်​တွင်​ အကာအကွယ်​ သုံးသင့်​ပါတယ်​
သင့်​ဆီမှာ ကူးစက်​​ရောဂါ ရှိ​နေ​သော်​လည်း သင်​သာ သာမန်​လူ​တစ်​​ယောက်​ကဲ့သို့ relationship တစ်​ခု တည်​​ဆောက်​နိုင်ပါတယ်​… လုံခြုံစိတ်​ချရတဲ့ လိင်​ဆက်​ဆံမှုကို ​သေချာ ​လေ့လာပြီး တခြားသူကို မကူးစက်​​အောင်​ ကာကွယ်​နိုင်​ပါတယ်​…ဆရာဝန်​နှင့်​​သေချာပြသပြီး ​ရောဂါလက္ခဏာများ နည်းပါး​အောင်​ ကုသနိုင်​ပါတယ်​… ဒါ​ကြောင့်​ သင်​ (သို့) သင့်​ဆက်​ဆံ​ဖော်​မှာ ကူးစက်​​ရောဂါ ရှိ​နေပါက မည်​သို့​သော​ရောဂါ ဖြစ်​ပါသလဲ ၊ ​သေချာ​အောင်​ ​ဆေးစစ်​ခြင်း၊ ကုသခြင်း​တွေ ပြုလုပ်​ရပါမယ်​
ဒီလို အချိန်​မျိုးမှာ သင်​ဟာ sex ကိစ္စကို မ​ရှောင်​နိုင်​ပါက အကာအကွယ်​ကို မှန်​ကန်​စွာ အသုံးပြုတတ်​ဖို့ လိုအပ်​ပါတယ်​…မိမိရဲ့ ကျန်းမာ​ရေး​ကောင်းမွန်​မှသာ အခြား​သောအရာ​တွေကို မှန်​ကန်​စွာနှင့်​ ​အောင်​မြင်​​အောင်​ ပြုလုပ်​နိုင်​မှာမို့… စိတ်​ဆန္ဒတစ်​ခု​ကြောင့်​ အမှားတစ်​ခု မပြုမိဖို့ရာ သတိချက်​သင့်​​ကြောင့်​ တိုက်​တွန်းရင်း…..
လူသားတိုင်း ​ပျော်​ရွှင်​ လှပတဲ့ အနာဂတ်​ကို ပိုင်​ဆိုင်​ကြပါ​စေလို့ ဆု​တောင်း​မေတ္တာပြုလျက်​
နောက်အပက်လည်း ဖိုမဆက်ဆံတဲ့အခါ ကိုယ်ဝန်မရအောင် ဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ် ရက်ရှောင်နည်းရက်ရှောင်ပုံတွေလည်း ဖြေကြားပေးစေလျုပါတယ်။